Laboratoara vatosoa. Vatosoa voajanahary nataon'ny gemologists manam-pahaizana manokana
FAMPANDROSOANA SY FIVAROTANA GEMSTONE
Fampirantiana maharitra misy karazana vatosoa maherin'ny 250 avy any Kambodza sy manerantany.
Ivon-toeram-pitsaboana gemological tsy miankina sy tsy miankina, manome andrana fitiliana sy serivisy fikarohana.
FANAMBARANA GEM & GEMOLOGY
FAMANTARANA GEM - FAMPANDROSOANA SY FITSABOANA - VIDIANA & GRADING
Museum sy varotra Gemstone
Mividiana vatosoa ao amin'ny tranombarotra anay
Institiota gemological tsy miankina sy tsy miankina, manome fanandramana gemological, serivisy fikarohana ary mari-pankasitrahana vatosoa.
Kambodza no loharano hividiananao safira, rubies, zircons ary vato marobe. Manomana fitsangatsanganana fitetezana 2 ka hatramin'ny 10 andro izahay, anisan'izany ny fitsangatsanganana, trano fandraisam-bahiny, fitsidihana ireo toeram-pitrandrahana sy mpikapa vatosoa.
Mifandraisa aminay mba hitsangatsangana mitovitovy endrika
Fampidirana ny Gem & Gemology
Fianarana momba ny fifandraisana
Fampidirana vatosoa lehibe hita eny an-tsena. Ity fanombohana, fandrosoana na haavo haavo an'ny manam-pahaizana ity dia manasongadina ireo lafiny manan-danja amin'ny vatosoa toy izany.
Ahoana no ahafantarana ny vatosoa voajanahary, synthetika, fitsaboana? Ahoana ny fanombanana ny kalitao sy ny vidiny? Hahazo valiny amin'ny fanontanianao rehetra ianao mandritra ity fampianarana ity.
NEW : Noho ny fangatahana goavana ataon'ireo mpianatray izay tsy afaka mandeha mandritra ny areti-mandringana dia azo atao izao ny mianatra amin'ny Internet.
Ny vaovaonay farany, lahatsoratra momba ny tontolon'ny vatosoa sy ny diany ary ny hetsika.
Ny emeraoda lehibe indrindra eto an-tany
Ny emeraoda lehibe indrindra eran'izao tontolo izao dia Inkalamu, ilay Lion Emerald fa The Bahia Emerald [...]
Ny fanantenana diamondra
Ny Hope Diamond dia diamondra manga 45.52 karat. Ny diamondra manga lehibe indrindra hita hatrizay [...]
Misaotra an-dRamatoa Angelina Jolie
Misaotra an-dRamatoa Angelina Jolie tamin'ity fitsidihana tsy nampoizina tao amin'ny magazinay androany ity. Misaotra ny [...]
Fitsangatsanganana Mogok, Myanmar
Fitsangatsanganana Mogok any Myanmar - Hotely Mogok - Mogok Burma ruby ​​fitsangatsanganana Mogok, Myanmar Taorian'ny [...]
Fiofanana momba ny varotra any Sabara Angkor Resort & Spa
Fanofanana momba ny varotra firavaka ao Sabara Angkor Resort & Spa Ms Iet no manofana ireo mpandray olona ary [...]
Resadresaka natao tany Luc Yen Nitafatafa androany tany Luc Yen aho, avy amin'ny National Vietnamese [...]
Resadresaka tamin'ny fahitalavitra frantsay Nitafa tamin'ny fantsona fahitalavitra M6 frantsay “ENQUETE EXCLUSIVE” aho, momba ny [...]
Fandefasana 3 andro manerantany
Ny fandefasan'ny Fedex Express matetika dia maharitra 3 ka hatramin'ny 4 andro aorian'ny fandefasana azy. Manara-maso an-tserasera ny dingana rehetra. Ilaina ny sonia rehefa hatolotra.
ireo vato 4 sarobidy
Ruby mpivady 2.75 CT $138.00
Kavina volamena safira 20K $899.00
Safira kintana mainty 1.58 CT $36.00
Emeraoda 0.45 CT $90.00
Emeraoda 0.42 CT $84.00
Emeraoda 0.14 CT $28.00
14K Rindran'ny volamena volamena $470.00
Diamondra 0.43 ct $280.00
Champagne diamondra 1.57 ct $6,406.00
14K Rindran'ny volamena volamena $530.00
… Ny fampahalalana nianarako dia ho sarobidy tokoa amin'ny ho avy ary manantena ny handray kilasy hafa any Etazonia aho hianatra bebe kokoa. Raha mikasa ny hividy firavaka ianao na aiza na aiza, dia tokony handray an'ity kilasy ity!
blondearch / Febroary 2020
… Tena tsara ny firavaka ary tena sariaka sy matihanina ny mpiasa. Nandao ny fivarotana aho niaraka tamin'ny peratra onyx tsara tarehy izay hampatsiahy ahy mandrakizay ny fotoana laniko tany Kambodza :). Raha manam-potoana bebe kokoa aho eto dia tiako ny manandrana ny atrikasa hanaovana peratra ny tenako!
EMZ / Novambra 2019
… Tena mendrika ny fitsidihana ny Gemological Institute, ary ny mpiasa rehetra dia tena matihanina, tsara fanahy, manam-paharetana ary manazava aminao ireo vatosoa mahaliana anao. Hiverina any Siem Reap aho ary hividy vatosoa avy eto amin'ny fitsidihako manaraka. Kintana 5!
TinkaMauu / Novambra 2019
… Ny firavaka dia mora vidy sy tsara tarehy ary tena faly amin'ny fividiananay izahay. Amin'ny ankapobeny dia fanandramana lehibe izay tena atolotray anao… faly be izahay tamin'ny kalitaon'ny serivisy, izay tsy azo antoka ao Siem Reap.
Laurence B / Jolay 2019
… Ny kalitao sy ny mombamomba ireo vato samihafa mety ho hitantsika ao amin'ny magazay. Nahita rojo vato fotsy topaza fotsy tsara izahay tamin'ny farany, fanomezana tonga lafatra ho an'ny mpiara-miasa amiko! Misaotra anao Gemological Institute!
Sayline / Enga anie 2019
… Nahazo fitsidihana mahaliana aho ary nianatra zavatra betsaka momba ny karazana vatosoa isan-karazany.
Tsy nahafantatra momba ny vato sy firavaka samihafa tany Kambodza aho. Zavatra tsara azo hatao ankoatra ny tempoly.
Benji C / Enga anie 2019
… Nanapa-kevitra ny hiverina any aminy izahay ary hividy ilay vato. Tokony holazaiko fa Daini raha ny marina dia Gem amin'ny fivarotana. Raha tsy eo izy dia mety tsy te hahazo na inona na inona amin'io fivarotana io akory isika. Famaranana, azo itokisana ny fivarotana ary ity no fivarotana tsara indrindra hitako ao amin'ny Siem Reap.
Jan Tara / Aogositra 2019
… Tonga dia naveriny avy hatrany ny mailako ary nanapa-kevitra ny hamolavola endrika sy vidiny izahay. Tonga haingana ilay peratra ary gaga aho tamin'ny hatsarany sy ny hatsarany. Hanoro hevitra an'ity serivisy ity aho ary hanao azy io indray.
Fialantsasatra23 / Aogositra 2019
… Hamarino tsara fa hitsidika ity toerana ity ianao raha mitady vatosoa ara-dalàna. Izy ireo ihany no fivarotana voamarina ao Siem Reap. Tena mandray ny mpiasa ary hamaly ny fanontanianao rehetra.
Oly1610 / Aogositra 2019
Manentana ahy fanahy ianao